အိုလံပစ်နှစ်တွင် IFSC Pan-Ams ချန်ပီယံ၏အရေးပါမှုကိုဖြိုခွဲ | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2020
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ - မတ်လမှယခုအပတ်အထိ ၁ သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ရှိအားကစားသမားတောင်တက်ခြင်းတွင်နိုင်ငံတကာအားကစားတောင်တက်အဖွဲ့ချုပ် (IFSC) ပန် - အမေရိကန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ အားကစားတောင်တက်ရာသီမှ စ၍ ချန်ပီယံများသည်ယခုနွေရာသီတိုကျိုရှိအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသော Pan-American အားကစားသမားများနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
စုစုပေါင်းအစက်အပြောက် ၄၀၊ အမျိုးသား ၂၀ နှင့်အမျိုးသမီး ၂၀ ပါဝင်သည်။ အိုလံပစ်အားကစားပွဲများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ကျန်ရှိသည့်အစက်အပြောက်အနည်းငယ်သာ (ထိုအထဲတွင်ယောက်ျားတစ် ဦး ၏နေရာနှင့် Pan-Ams အတွက်အထူးသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သာရှိသည်) ။ ဖျော်ဖြေဖို့ဖိအားတစ်ခုအားလုံးအချိန်မြင့်မားသော။
မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကအားကစားသမားများသွားသည့်အတိုင်း Pan-Ams သည်အိုလံပစ်အားကစားပွဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီနှစ်ဂိမ်းဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်တက်ခြင်းရဲ့အားကစားအတွက်သမိုင်းကြောင်းအရအမြတ်အစွန်းကြီးမားတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအားကစားကို repertoire မှာထည့်သွင်းသွားမှာပါ (ဘေ့စ်ဘော၊ softball၊ ကရာတေး၊ စကိတ်စီးခြင်း၊
ဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုဖြစ်သည့်စုပေါင်းစည်းကမ်းကိုအဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အမြန်တက်ခြင်း၊ ခဲတောင်တက်ခြင်းနှင့်ကျောက်ဆောင်ခြင်း။ ဆုံးမမှုသုံးခုကိုဖြတ်ပြီးအကောင်းဆုံးစုစုပေါင်းရမှတ်ကိုရရှိသောအားကစားသမားသည်အိမ်သို့ရွှေကိုယူသွားလိမ့်မည်
အိုလံပစ်ပွဲမတိုင်ခင် LA မှာရှိတဲ့ Pan-Ams ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပါ ဦး ။ အမျိုးသမီးများနေ့ပြိုင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်၊ စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ မတ်လ ၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင်တစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပမည်။ ပြန်ကြားချက်များကိုဒီမှာကြည့်နိုင်သည်
Pan-Ams တွင်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်နေရာ ၂၈ (အမျိုးသား ၁၄ ယောက် / အမျိုးသမီး ၁၄) နေရာရှိသည်။
အမျိုးသားစာရင်းတွင်ပါဝင်သည်မှာ (ကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်) - Adam Ondra (Cze), Bassa Mawem (FRA), ဇန်နဝါရီ Hojer (GER), ပန်ယုဖေး (CHN), အဲလ်ဘတ်တိုဂျင်းနက်စ်López (ESP), က Nathaniel Coleman (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု), Tomoa Narasaki (JPN), Jakob Schubert (AUT), Rishat Khaibullin (KAZ), Mickaël Mawem (FRA), အဲလက်စ် Megos (GER), Ludovico Fossali (, ITA), Sean McColl (နိုင်သလား) နှင့် Kai Harada (JPN).
အမျိုးသမီးများစာရင်းတွင် (ကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်) ပါဝင်သည်။ ဂျူလီယာချန်နိုဒီFRA) Mia Krampl (SLO), Iuliia Kaplina ဖြစ်သည် (ရု), Kyra Condie ဖြစ်သည် (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု), လော်ရာရိုဂိုရာ (, ITA), Yiling သီချင်း (CHN), Janja Garnbret (SLO), Akiyo Noguchi (JPNShauna Coxsey (၊GBR), Aleksandra Mirosław (Pol), Petra Klingler (Sui), Brooke Raboutou (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု), ဂျက်စီကာ Pilz (AUT) နှင့် Miho Nonaka (JPN).
အထက်အားကစားသမားဖြစ်စေမှာအရည်အချင်းပြည့်မီ IFSC ပေါင်းစပ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Hachioji ရှိသြဂုတ် ၁၁-၂၂ မှနိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်မှဒီဇင်ဘာလအထိကျင်းပမည့်ကမ္ဘာ့အိုလံပစ်ခြေစစ်ပွဲပွဲမှဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Toulouse တွင် ၁ ။ Pan-Ams အပြီးတွင်စုစုပေါင်းအစက်အပြောက်ရှစ်ခု (အမျိုးသားလေး ဦး / အမျိုးသမီးလေး ဦး) ကျန်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအာဖရိက၊ ဥရောပ၊ Oceania နှင့်အာရှချန်ပီယံရှစ်တွင်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအားသာချက်နှစ်ခု (အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး) ကိုအိုလံပစ်အားကစားသုံးပွင့်ဆိုင်ကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီးကော်မရှင်တစ်ခုသည်အားကစားတစ်ခုစီအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ကိုယ်စားပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအားကစားသမားအရေအတွက်နည်းသောနိုင်ငံများသို့အစက်အပြောက်များကိုခွဲဝေပေးသောကော်မရှင်ဖြစ်သည်။ လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းမည်သည့်ပြိုင်ဆိုင်မှုမဆိုဤအစက်အပြောက်များကိုဖြည့်နိုင်သည်။
လက်ရှိအားကစားသမားများအိုလံပစ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ: 28 (၁၄ ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၁၄ ယောက်)
Pan-Ams မှတဆင့်အားကစားသမားအစက်အပြောက်အရေအတွက်:2(အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး)
African Champs မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအားကစားသမားအစက်အပြောက်အရေအတွက်။ :2(အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး)
ဥရောပချန်ပီယံမှတဆင့်ရရှိနိုင်အားကစားသမားအစက်အပြောက်အရေအတွက်။ :2(အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး)
Oceania Champs မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအားကစားကွင်းအစက်အရေအတွက်2(အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး)
အာရှချန်ပီယံများမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောအားကစားကွင်းအရေအတွက်။2(အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး)
အိုလံပစ်အားကစားသုံးပွင့်ဆိုင်မှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအစက်အရေအတွက်2(အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး)
၂၀၂၀ အိုလံပစ်အတွက်အားကစားသမားအရေအတွက်စုစုပေါင်း - 40